Laura Buckler Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Laura Buckler
Laura Buckler waa tabarucaad at Qormada Dugsiga Sare iyo qoraa madaxbanaan. Iyadu waxay diiradda saaraysaa oo u heellan tahay shaqadeeda, iyadoo u beddelaysa waaya-aragnimadeeda nolosheeda sheekooyin la xiriiri karo. Ka shaqaynta maareeye suuqgeyn, waxay kobcisay dareenkeeda lixaad ee ku saabsan waxa dadku raadinayaan. Waxaad kala socon kartaa barta Twitter-ka.
7 Tusaalooyin cadeynaya sida ay Awood ugu leedahay AR xagga suuq geynta
Khamiis, Juun 5, 2018 Laura Buckler
Ma qiyaasi kartaa joogsiga baska ee ku madadaaliya intaad sugayso? Waxay ka dhigi laheyd maalintaada mid xiiso badan, maahan? Waxay kaa mashquulineysaa culeyska ay soo rogeen shaqooyinka maalinlaha ah. Waxay kaa dhigi laheyd dhoola cadeyn. Maxay magacyadu uga fikiri kari la’yihiin siyaabaha hal abuurka leh ee ay ku dhiirrigelinayaan alaabtooda Oh sug; mar hore ayay sameeyeen! Pepsi wuxuu khibrad noocan oo kale ah u keenay rakaabkii London dib ugu laabtay 2014! Hoyga baska ayaa dadka ka bilaabay adduunka madadaalada shisheeyaha,